Barcelona Oo Burburinaysa Heshiiska Xiddig Ka Tirsan Kooxdeeda Oo - Axadle Wararka Maanta
Barcelona Oo Burburinaysa Heshiiska Xiddig Ka Tirsan Kooxdeeda Oo
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa isku diyaarinaysa in ay kansasho heshiiska mid ka mid ah ciyaartoydeeda kooxda koowaad haddii uu iska diido inuu tago maalmaha kooban ee ka hadhsan waqtiga uu xidhmayo suuqa iibka ciyaartoyda ee xagaagan.
Blaugrana oo dhibaato dhaqaale oo xun ku dhex jirta ayaa u baahan inay meesha ka saarto qaar ka mid ah ciyaaryahannadeeda si ay u dhinto mushaharka ay bixiso oo xad-dhaaf ah, laakiin waxay dhibaatadu ka haysataa xiddigaheeda oo dhawr jeer oo hore mushahar dhimis sameeyey, isla markaana iska diidan inay mar kale dhimaan mushaharkii uu u waajibinayay heshiiskii ay saxeexeen.
Madaxweyne Joan Laporta oo shalay sheegay in duruuftu ku kalliftay in uu soo amaahdo qayb ka mid ah mushaharka ciyaartoyda oo uu qasnadda kooxda ka waayey, ayaa waxa uu doonayaa in muddada labada usbuuc ah ee ka hadhay xilliga uu xihdamyo suuqa iibku, ay meesha ka baxaan dhawr ciyaartoy oo uu ku qanacsan yahay in aanay faa’iido u lahayn Barca.
Laakiin ciyaaryahannadan ayaa iyaguna doonaya in ay sii joogaan maadaama ay mushaharooyin wanaagsan ka qaataan Camp Nou.
Sida uu qoray wargeyska Sport ee kasoo baxa Spain, Barcelona ayaa u sheegtay difaaca reer France ee Samuel Umtiti in uu kooxda kaga tago muddo laba usbuuc gudahii ah isaga oo ku baxaya amaah ama iib, laakiin Umititi ayuu warku sheegay inuu iska diiday.
Umtiti ayaa u sheegay kooxda intii lagu jiray kulamadii saaxiibtinimo in la siiyo fursaddii ugu dambaysay si uu iskugu muujiyo Ronald Koeman, laakiin tababaraha reer Netherlands ayaan haddana ku qancin.
Laacibkan oo ay kooxaysanayaan kooxo ka dhisan Faransiiska ayaa la sheegay in aanu doonayn inuu dib ugu laabto Faransiiska.
Si kastaba, wargeyska Sport waxa uu sheegay in Barcelona ay diyaarisay qorshihii ay kaga takhalusi lahayd laacibkan oo ay gebi ahaanba kansalayso qandaraaskiisa.
resignation of outgoing President Edgar Lungus
Guddoomiyihii deegaanka Garasbaaleey oo qarax lagu